Maxaad ka fileysaa kulanka caawa Juventus vs Chelsea? - Caasimada Online
Home Warar Maxaad ka fileysaa kulanka caawa Juventus vs Chelsea?
Maxaad ka fileysaa kulanka caawa Juventus vs Chelsea?
Waqtiga: November 20, 2012 10:45 PM Geeska Africa ama 7:45 PM UTC
Garoonka: Juventus Stadium —Torino
Garsooraha: C. Çakιr‎
Iyadoo ay wiilasha Roberto Di Matteo hal dhibic ka sareeyaan kooxda ay martida u yihiin, lakiin guul ama dhibic ay ka helaan Bianconeri waxay u tahay iyagoo sii carabaabay inay isi soo taagaan wareega 16ka, hadii ay Juve guul darro bido Blues waxaa sii yaraan doona in laga hadlo inay Juve seegto wareega xiga.
Line Up-ka Macquulka ah inay labada koox kusoo galaan garoonka
Juventus ayaa barbaro goolal la’aan ah la gashay Lazio dhamaadkii isbuucaan, Juve ayaa sidoo kale walaac ka qabta dhaawaca Mirko Vucinic ee uu kulankaan ku seegayo tan iyo markii ay Old Lady guul darro kasoo gaartay Inter, halka Paolo De Cegile uu kasoo kabsanaayo dhaawac bowdada ah.
Andrea Pirlo ayaa kooxda kusoo laban doona ka dib markii uu keydka fadhiyey kulankii isbuuc dhamaadka, ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe Manchester United Paul Pogba ayaana keydka soo fariisan doona.
Sebastian Giovinco ayaa laga yaabaa inuu kulankaan kusoo bilaaban waayo ka dib markii uu waxoogaa si habacsan u dheelacay kulankii Lazio, Alessandro Matri iyo Nicklas Bendtner ayaana sugaaya doorarka labada garab iyadoo uu Simone Pepe sabtidii dhaawac kasoo laabtay uuna bedel kusoo galay.
Roberto Di Matteo ayaa laga yaabaa inuu Fernando Torres booskiisa seejiyo uuna garabka u bedelo halka Daniel Sturridge uu booska weerarka u qaadanayo, si kastaba, in kulankaan la ciyaarsiiyo ayaa noqon karta wax weyn iyadoo ay u badan tahay in laga soo tago weeraryahanka ku fadhiya 50 milyan ee ginni.
Chelsea waxaa dhaawac uga maqan halyeeyadooda John Terry (Jilibka) halka Frank Lampard uu ka dhaawacan yahay (Canqawga) sidoo kale Ashley Cole ayaa shaki ku jiraa iyadoo uu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii West Brom.
Oscar, Juan Mata, Branislav Ivanovic iyo Ramires ayaa dhamaantood keydka ku bilowday kulankii guul darada Sabtida, laakiin waxay Line-up kusoo laabanayaan kulanka caawa.
Tababaraha ayaa lumin kara David Luiz ka dib markii uu qaab ciyaareed habacsan soo bandhigay kulankii Baggies, waxaana laga yaabaa in Cesar Azpilicueta lagu sii haayo booskiisa daafaca midig halka Ivanovic laga ciyaariinayo daafaca dhexe.
Juventus guushii 4-0 aheyd oo ay ka gaartay FC Nordsjaelland kulankoodii ugu dambeeyey ee Champions League ayaa soo afjartay sagaal kulan oo barbaro ah oo koobabka Yurub.
Kooxda heysata Horyaalka Talyaaniga ayaa Rikoor fiican ka heysata marka ay ka hor timaad kooxaha Ingiriiska , 12 kulan ayeyna guul gaartay oo ka mid ah 20 kulan, si kastaba, waxay hada guul ka gaareen hal kulan oo ka mid ah lixdii kulsn ee u dambeysay.
Gianluigi Buffon (Sawirka Midig), Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio iyo Andrea Pirlo ayaa dhamaantood ciyaaray daqiiqad walba oo ay Old Lady ciyaartay Wareega Group-yada, halka Petr Cech, Branislav Ivanovic iyo David Luiz ay sidoo kale u ciyaareen Blues.
Chelseaayaa guul gaartay keliya hal kulan sideed kulan oo ay booqatay Italy, waxayna markaas Lazio ku garaacday 4-0, heerka Group-yada UCL kuwaas oo barbaro dhamaadkii isbuuca la galay Juve.
Kooxda ka dhisan galbeedka London ayaa keliya guul gaartay hal jeer sagaal kulan oo ay booqatay garoomo kale, halka aysan sidoo kale guul gaarin afarteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League.
Tababare Roberto Di Matteo aya u ciyaarayey xulka Italy markii uu goolhayaha Bianconeri Buffon xulka u safanaayey kulankiisii ugu horeeyey waxayna markaas barbaro la galeen xulka Russia koobkii aduunka ee 1998dii lugta hore ee play-off-ka
Labada ciyaaryahan ee Chelsea Fernando Torres iyo Juan Mata ayaa soo taabtay shabaqa Buffon markii ay Spain 4-0 finalkii Euro 2012 ku dubatay Italy.
Labada ciyaaryahan ee kooxda Juve Chiellini iyo Marchisio ayaa hal jaale u jira ganaax, halka Luiz uu isna jaale u jiro inuu kulan seego.
Inoo sheeg saadaashaada kulankaan. Ma Juventus ayaa garaaci doonta Chelsea, mise Chelsea ayaa ka talaabsan doonta Old Lady, mise waa la isku garba dhici doonaa.?
Hadii aad haleesho saadaasha saxda ah ee kulankaan waxaan kaa balan qaadeynaa inaan saadaashaadii saxda aheyd kusoo qorno natiijada ciyaartaan marka aan Website soo gelineyno.